Kedụ ka Odịnaya Mgbasa Ozi Ga-emetụta ellingre Gị? | Martech Zone
Mgbe mbụ m dere aha maka ọkwa a, edere m Olee otú mana m n'eziokwu ekwetaghị m ọtụtụ ụlọ ọrụ na-aghọta etu ibe ha si emetụta ibe ya ka m wee gbanwee ya Olee Otú O Kwesịrị. Anyị na-ahụkarị akwụkwọ akụkọ mara mma na ọmụmụ ihe nke ngalaba ngalaba azụmaahịa mepụtara nke a na-egosi n'ụzọ na-enweghị ntụpọ, akọwapụta ya n'ụzọ zuru oke ma debe ya nke ọma. Mana mgbe ahụ anyị na ndị otu ahịa na - apụ apụ na - enweta ngosipụta ma anyị na - ahụ ngosi nke na - enweghị isi.
Nke a anaghị ata ụta maka ahịa ahịa ma na-aja ngalaba ngalaba azụmaahịa ahụ mma. Ọ pụtara n'ezie na ndị ahịa anaghị eji ọdịnaya azụmaahịa akpọrọ ihe ma zere kpamkpam. O yikarịrị ka nke ahụ na-egosi nnukwu nsogbu ebe ahịa anaghị ebuga onye ọbịa ahụ na ire ere. Ọtụtụ mgbe, n'okwu ndị ahụ, otu ndị na-ere ahịa na-eti mkpu banyere ogo ndu na ngalaba azụmaahịa na-eti mkpu na ndị ahịa anaghị enwe ike imechi ihe ọ bụla.
Ọdịnaya Ọdịnaya bụ ụzọ na-enyere aka ịme ka amata na mmasị site na iche echiche, ọchị, na itinye ọdịnaya. Mana otu ndi otu ahia kwesiri iziputa nke oma. A sị ka e kwuwe, ndị na-azụ ahịa na-apụwanye iche site na otu ndị ahịa n'ahịa ahịa niile. Nke ahụ pụtara na itinye aka ọ bụla kwesịrị ịdị oke uru. Ọ pụtara na ndị na-azụ ahịa kwesịrị ịnwe ọdịnaya bara uru iji wulite azụmaahịa ha n'ime. Ihe dị mkpa nke ọdịnaya na usoro ire ahịa mere ka anyị kọwaa ihe Contgha Ọdịnaya pụtara: Sgha Ọdịnaya na-enyere ndị ahịa aka ịchọpụta, nyefee, ma soro irè nke ozi na-aga n'ihu ahịa ahịa. Daniel Chalef, Ihe Ọmụma
Otu ndi ahia nwere ike iri uru nke ire ahia. Canzụ ahịa nwere ike ịme ka ahịa nwee ike ịkụziri ha ihe mmụta nke ha mụtara site na Ahịa Ọdịnaya - dị ka a hụrụ na nke a infographic si KnowledgeTree, Ahịa Ọdịnaya, Na-ere Ọdịnaya.
Tags: ọdịnaya kacha mmaọdịnaya dị mkpacontent Marketingire ọdịnayaọdịnaya infographic na-ereinfographictụọ ogo ọdịnayanri ọdịnayaezubere iche ọdịnaya